norman - Synonyms of norman | Antonyms of norman | Definition of norman | Example of norman | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for norman
Top 30 analogous words or synonyms for norman
အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း ဓာတ်မြေဩဇာ မရရှိသည့်အကြောင်းအရာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အချက်ကို အခြေခံလျက် ဓာတ်မြေဩဇာထောက်ပံ့ ရေးကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြစိမ်းရောင် တော်လှန်ရေး စတင်သူ နော်မန်ဘိုရစ် (Norman Borlaug)၏ အာဖရိကကို ကျွေးမွေးရန် အခက်အခဲဆိုသည့် စာအုပ်ကို ကိုးကားထားသည်။
အဲလစ်ဝေါ်လ်တန် ၂၀၀၉ တွင် Crystal Bridges Museum သည် Norman Rockwell ၏ iconic Rosie the Riveter ပန်းချီကားကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုပန်းချီကားမှာ ရောင်းချရန်အတွက် မဟုတ်ပဲ ရာသက်ပန်သိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Christian metal Christian metal သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အတူ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၇၀အစောပိုင်းတွင် Jesus movement Hippie movement တို့မှစတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ Christian hippies ကို Jesus People ဟု သိကြသည်။ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသည့် ဂီတဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို Jesus music ဟုလည်းခေါ်သည်။ ပထမဦးစွာ Southern California မှ စတင်ခဲ့ပြီး hippie street ဂီတသမားများက ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုဂီတသမားများသည် သူတို့၏စာသားများသည် ခရစ်ယာန်အမှာစာနှင့် စီးဝင်ခဲ့သော်လည်း သူတို့ပြောင်းလဲမတီးခတ်စဉ် တူညီသော ဂီတပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲတီးခတ်ကြသည်။အစောပိုင်း Christian rock ဂီတသမားများထဲမှ Larry Norman သည် သူတို့၏ ပထမဆုံး album Upon Thick Rock ၁၉၆၉တွင် ဖြန်ချီခဲ့ပြီးပထမဆုံး Christian rock album ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Norman ၏ သီချင်း “Why Should the Devil Have All the Good Music သည် ထိုဂီတသမားတို့၏ အကျဉ်းချူပ်စိတ်ကူးဖြစ်သည်။
ပင်လယ်ပျော်ဘီလူး Shortly after the Iran-Iraq war, Norman International bought the wreckage of the ship and repaired her. She was renamed "Happy Giant" after the repairs. These repairs were done at the Keppel Company shipyard in Singapore after towing her from the Persian Gulf. She entered service in October 1991 as "Happy Giant".
Bluegrass Bluegrass ဒုတိယမျိုးဆက်ဂီတသမားများသည် ၁၉၆၀အလယ်မှ နောက်ပိုင်းအထိ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်၍ စတင်ဖျော်ဖြေလာကြသည်။ Jimmy Martin, Doc Watson, J.D.Crowe, Doyle Lawson, Sam Bush, Bela Fleck, John Hartford, Jerry Douglas, Norman Blake, Frank Wakefield, Bill Keith, Del Macoury နှင့် Tony Rice တို့ပါဝင်သည်။ New Grass Revival, Seldom Scene, Kentucky Colonels နှင့် The Dillards တို့သည် progressive bluegrass ကို ဖွံဖြိုးစေခဲ့သည်။ ၁၉၆၀နှင့် ၁၉၇၀တွင် အခြားအုပ်စုများသည် rock ဂီတနားထောင်သူများသို့